မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဘီလူး တေဇပိုင်တဲ့ ဟိုတယ်များအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း.. ~ ဒီမိုဝေယံ
မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဘီလူး တေဇပိုင်တဲ့ ဟိုတယ်များအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း..
၂၀၀၉ခုနှစ် ၉လပိုင်း ၁၄ရက်နေ့က တေဇပိုင် ထူးကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီ Huaneng Lancang River Hydropower Co., Ltd. China တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ရင်းမြစ်များတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့စဉ်ကပုံပါ...။
စစ်အာဏာရှင် လက်ထက် အာဏာရှုးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ဝေစားမျှစား ထင်တိုင်းကြဲပြီး ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ သားမက်လို့ အပြောခံရလောက်အောင် နာမည်ကြီးတဲ့ ခေတ်ပျက်သူဋ္ဌေး လက်နက်ပွဲစား ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေနဲ့ တစ်ဦးတည်းပိုင် ဈေးကွက် စီးပွားရေးတွေ လုပ်ပြီး ရှိသမျှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ မြန်မာပြည်က အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဦးတေဇရဲ့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ အကြောင်းကို (Generals and their relatives watchers GRW စစ်အာဏာရှင်နှင့် အဆက်အနွယ်များအား စောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့) အတွင်းသိမှ ပေးပို့လာတာကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
တေဇရဲ့ရေတွက်လို့မရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေထဲက လုပ်ငန်းတခုကို ပြပါဆိုရင်တော့ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဦးစားပေးပြီးပြောကြရအောင်… ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ အနည်းနဲ့အများ ပတ်သတ်နေတဲ့ အတွင်းသိသူ တစ်ယောက်ဆိုတော့ တေဇရဲ့ ဟိုတယ် လုပ်ငန်း အကြောင်းတွေကို ဦးစွာ ပြောပြပါမယ်..။ ပထမဦးစွာလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ များကသူ ဟိုတယ်တွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးနေရာတိုင်းမှာ စဆောက်တာတွေကို ပြောပါရစေ ကမ္ဘာကျော် ဟိုတယ်ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ရှန်ဂရီလာတို့ …. Traders Hotel တို့ Hilton Hotel တို့တောင် အဲ့လောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ နိုင်ပါ့မလားလို့ ထင်မိပါတယ်… မြုပ်နှံနိုင်မယ် ဆိုရင်တောင် အခု လို ခရီးသွားတွေ သိပ်မလာတဲ့ အချိန် မှာဟိုတယ်တွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး နေရာတိုင်းမှာဆောက်ဖို့ ဆိုတာတော်ရုံတန်ရုံ ငွေဖြူနဲ့ ကတော့ ဘယ်လို မှ ဆောက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး…။ ငွေ ကို စက်နဲ့ ရိုက်ထုတ်ရင်ထုတ် သို့ မဟုတ် ကျန်တဲ့ လိုအပ်သမျှကို အလကား အကုန်ရမှပဲ ရပါမယ်… ။ သစ်ကနေ စပြောရရင် မြန်မာပြည်သစ်တောထဲ က သစ်တွေကို အကုန်ဖြုန်းတီးဖြစ်တဲ့ မောင်တေဇ ရဲ့ဟိုတယ် List တွေကို အရင်ဆုံးပြောပါရစေ…. အောက်ကလင့်တွေကတော့ မောင်တေဇပိုင်တဲ့ ဟိုတယ်တွေပါပဲ...။ စီးပွားရေးအစုံလုပ်ပြီး ဓနအင်အားမှာ ဘယ်သူမှ လိုက်မမှီတဲ့ အတွက် ဟိုတယ်တွေမှာလည်း သူ့ကိုဘယ်သူမှ မပြိုင်နိုင်ပါဘူး။
အထက်ပါ တည်းခိုခန်းတွေက တစ်ညကို ဒေါ်လာ အနည်းဆုံး ၁၅၀ ကနေစပြီး ပုဂံ ကဟိုတယ်ဆိုရင် အရင်တုန်းက (၂)ခန်းပဲ ပါတဲ့အခန်းဆိုရင် တစ်ညဒေါ်လာ ၇၀၀ နီးပါးရှိပါတယ်။ ဘာတွေပါလည်းဆိုရင် အဲ့ဒီအခန်းက ၂ထပ်ဆောင် လိုမျိုး ဆောက်ထားပြီး အခန်းရှေ့ မှာတော့သီးသန့်ရေကူးကန်လေးနဲ့ပါ….။ ရှင်ဘုရင် ပုဆိုးပိုးချည်းပဲ လို့ မသုံးချင်ပါဘူး သူခိုးကြီးတွေက နိုင်ငံသစ်တောတွေ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာတွေကို သူ့ အမေလင် ပစ္စည်းလို ထင်တိုင်းသုံးနေကြတာလေ..။ ဒမြတွေ ပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဆိုတော့နိုင်ငံတွင်းက ကောင်းပေ့ ညွှန့်ပေ့ဆိုတဲ့ ကျွန်းသစ်တွေ.. ကြိမ်တွေ သုံးထားလိုက်ကြတာ .. လာတည်းခိုတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေတောင် အံ့သြလက်ဖျား ခါကျပါတယ်…။
သစ်တောထဲကနေ လက်ညှိုးထိ်ုး ခုတ်လာတဲ့ကျွန်းသစ်တွေကို အသားကျအောင် အခြောက်မခံပဲ လိုချင်တာ တစ်ခါတည်း တန်းပြီးဆောက်တော့ အသားမကျသေးတေ့ ကွဲကုန်တာပေါ့ .. ဒီလို ကျွန်းတစ်ပင်ရဲ့ တန်ဖိုးကို လုံးဝမသိ နားမလည်တော့ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ထားတာလေ… အသားကျအောင် မထား သေချာ ပေါင်းမတင်တော့ ကွဲနေတဲ့သစ်သားခုံတွေ တိုင်တွေ ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်ကြည့် ပြီး အင်မတန်မှ နှမြောတသ ဖြစ်မိရတယ်လေ.. ဒီလောက်တောင် ခုတ်ချင်တိုင်း ခုတ်နေမှတော့ ကုန်ြပီပေါ့ … ဒါကတော့ မောင်တေဇရဲ့Aureumpalace က First Class ကြယ်ငါးပွင့် သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ အတန်းစားတွေပေါ့…. ဘယ်ဈေးကွက်မှ မလွတ်သွားအောင် Deluxe ဟိုတယ်အဆင့်တွေပေါ့… ရန်ကုန်မှာ Deluxe အဆင့်ရှိတဲ့ ဟိုတယ်တွေကတော့ Strand Hotel, Sedona, Governor Resident တို့နဲ့ တေဇပိုင်တဲ့ Aureumpalace တို့ပဲရှိပါတယ်…။ ထူးခြားတာက တေဇဟိုတယ်တွေက နယ်တွေမှာ ရှိပြီးမြေနေရာ များများ ကျယ်ကျယ် သုံးနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ တစ်ခြားဟိုတယ်တွေထက် သာလွန်ကောင်းမွန်နေတာပေါ့။
အောက်က လင့်ကတော့ တေဇ Second Class လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်တွေပါ…. Second Class ကတော့ ရန်ကုန်က Chatrium (ယခင် Hotel Nikko), Grand Plaza park Royal တို့နဲ့ အဆင့်တူတွေပါပဲ.. http://www.myanmartreasureresorts.com/ ဒီအပေါ်က Myanmar Treasure Resorts Group ကတော့ သူ့ရဲ့ဒုတိယတန်းစားလို့ သတ်မှတ်လို့ ရတဲ့ ဟိုတယ်တွေပါ အုတ်ကတော့ ဘယ်က ရလည်းမသိပေမယ့်ကျွန်းသစ်နဲ့ လိုအပ်တဲ့ သစ်တွေကို အခန်းထဲ မှာ ကြိမ်နဲ့ လုပ်မယ့် မီးအုပ်ဆောင်းတွေ အတွက်ကတော့ တောထဲ ကနေ ခုတ်ချင်တိုင်း လက်ညှိုးထိုး ခုတ်ခွင့် ရထားတယ်လေ…။ ဘိလပ်မြေက လည်းသူတို့စက်ရုံ သို့မဟုတ် အစိုးရ ဘိလပ်မြေ စက်ရုံ ကနေ ယူရုံပါပဲ သယ်ဖို့ ကားတွေကလည်း လိုင်စင်မဲ့ကားတွေက ဖောချင်းသောချင်း.. တစ်ခြားခရီးသွား ကုမ္ပဏီက ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့ ပါမစ်တွေ ကျအောင် မနည်းလုပ်နေရတဲ့ အချိန်မှာ.. သူ့ကတော့ ကြိုက်တဲ့ကားသွင်းချင်တိုင်း သွင်းခွင့် ရှိတယ်လေ.. အင်း.... ကားဝယ်တဲ့ ပိုက်ဆံက လည်းလိုသလောက် ရိုက်ထုတ်လို့ ရလောက်အောင် ဖြစ်နေလောက်တဲ့ငွေ ၀န်ထမ်းတွေကို ပေးတာကလည်း ပြည်သူတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ သူတစ်ဦးတည်း မောင်ပိုင်စီးထားပီး လက်နက် အရောင်းအဝယ် လုပ်တာတွေ ကနေ နေတဲ့ ၀င်ငွေတွေပေါ့...။ ဒါကြောင့်လည်း အနည်းဆုံးလခ အနိမ့်ဆုံးဝန်ထမ်းတွေက ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကနေ မာန်နေဂျာ အဆင့်ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ အထိရကြပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေ ရဲ့သားသမီးတွေပဲ ခေါ်သုံးတာ များပါတယ်။
ကိုဒီမိုရေ စာလည်းရှည်သွားပြီ.. ကျတော်နောက် ထပ်ပြီး ပို့ပေးပါဦးမယ်..။ အခုဒီမှာပါတဲ့ လိပ်စာတွေ အီးမေးလ်တွေ ကိုတော့ အားလုံးသိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်တာပါ....။ ကျွန်တော်တို့ GRW အဖွဲ့အနေနဲ့ အာဏာရှင်နဲ့ ပတ်သတ် ဆက်နွယ်နေသူတွေ အားလုံးကို ဆက်လက် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးသွားမှာပါ...။ အားလုံးကလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဖော်ထုတ်ပေးစေလိုပါတယ်...။